आज माघ २१ गते मङ्गलबारको राशिफल – तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् – Hamrosandesh.com
आज माघ २१ गते मङ्गलबारको राशिफल – तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस्
मेष : अवसर हातलागी नभए पनि सम्भावना खोजी गर्ने समय छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा पछिलाई फाइदा हुनेछ। तत्कालै समस्या समाधान नहुन सक्छ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। कमजोरीका बाबजुद काँधमा जिम्मेवारी थपिनेछ। काम रोकिनाले दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि आराम लिनुपर्ने अवस्था रहनेछ।